पारिश्रमिक बढाएर कपिलको शोमा फर्कने भए डा. गुलाटी – Enayanepal.com
पारिश्रमिक बढाएर कपिलको शोमा फर्कने भए डा. गुलाटी
२३ चैत, एजेन्सी । कपिल शर्मा र सुनिल ग्रोभरबीचको झगडाको प्रत्यक्ष असर सोनी च्यानलको ‘टीआरपी’मा परिरहेको देखिन्छ । सुनिलले शो छोडपछि कपिलले ‘द कपिल शर्मा शो’को तीन श्रृंखला प्रसारण गरेका थिए । यी श्रृंखलामा दर्शकहरु रुष्ट देखिए र च्यानलको टीआरपीमा नराम्रो प्रभाव पर्यो ।